MOGOK Phone Directory v3 (Android) - .::just for share::.
Home » android apps » MOGOK Phone Directory v3 (Android)
မိုးကုတ်ဖုန်းလမ်းညွှန် Android app ဗားရှင်းအသစ် v3
ဗားရှင်းအသစ် ပြောင်းလဲချက်များမှာ -
အရေးကြီးဖုန်းနံပါတ်နှင့် စီးပွားရေးလမ်းညွှန် သီးသန့်ခွဲထားခြင်း
စီးပွားရေးလမ်းညွှန်တွင် လုပ်ငန်းအမျိုးအစားများ ခွဲထားခြင်း
စီးပွားရေးကြော်ငြာများ အသစ်ထည့်သွင်းရန် message လှမ်းပို့နိုင်ခြင်း
ဖုန်းနံပါတ်များကို တစ်ခုချင်း ရွေး၍ ခေါ်ဆိုနိုင်ခြင်း
စသည့်အပြင် Design ကိုလည်း အရင်အဟောင်းနှင့် မတူညီတဲ့ ပုံစံအသစ်ပြုပြင်ထားပါသည်။
Version အဟောင်းများတွင် မြန်မာစာ မရှိသေးသော ဖုန်းများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ရန် Zawgyi font ကို embedded ပြုလုပ်ပေးထားခဲ့ပါသည်၊ သို့သော် အချို့ဖုန်းများတွင် မြန်မာစာ မပေါ်သည်များ ကြုံတွေ့ရသဖြင့် ယခု version တွင် font embedded မလုပ်ထားတော့ပါ။
ထို့အတွက် မိုးကုတ်ဖုန်းလမ်းညွှန် ကို အသုံးပြုရန်အတွက် မိမိဖုန်းတွင် မြန်မာစာဖောင့် သွင်းထားရန် လိုအပ်ပါမည်။
by Mogok Thar